Izicelo ze-iPhone | Iindaba ze-IPhone (iphepha 5)
Ilungelo elilodwa lomenzi libonisa ukuphuculwa okunokwenzeka kukhetho "Musa ukuphazamisa xa uqhuba"
Ngaphandle kwamathandabuzo, yinto yesazela somntu ngamnye ukushiya i-iPhone kwigumbi leglavu ngelixa uqhuba kwaye ...
I-bug kwi-WhatsApp ivumela abo sinxibelelana nabo ukuba baqhubeke nokusikhathaza. Sikubonisa isisombululo sethutyana
Imiyalezo ye-WhatsApp yesicelo ine-bug kwiiseva zayo ezithintela usetyenziso ekubeni lukwazi ukubhloka ngokuchanekileyo yonke imiyalezo kunxibelelwano oluvaliweyo kunye nokukwazi ukubona iprofayile kunye nexesha lokugqibela lonxibelelwano.
I-Instapaper yazisa ukuba iya kuyeka ukunikezela ngenkonzo eYurophu ukusukela namhlanje ngenxa ye-GDPR
Inkonzo yokugcina ikhonkco, i-Instapaper, isandula ukubhengeza ukuba ukusukela namhlanje, umhla apho i-RGPD entsha iza kuqala ukusebenza, iya kuyeka ukubonelela ngeenkonzo zayo eYurophu.
U-Apple ujika kwiNdebe yeHlabathi ngokongeza imizobo emitsha kwiiVenkile zeApple
Njengesiqhelo kwiminyhadala ephezulu, iApple ihlaziya iApple Umboniso ngokongeza imizobo yeNdebe yeHlabathi ye2018 eRashiya.
UCastro uhlaziywa kwinguqu yesi-3 kwaye uzisa uCastro Plus
UCastro, omnye wabadlali bePodcast ababalaseleyo, uhlaziywa kwinguqulelo yesi-3 kwaye izisa uCastro Plus, usetyenziso lweApple Watch nokunye okuninzi.
I-Apple C ye-Apple ukuya kwiCable Lightning yehlisa amaxabiso
Iintambo ze-USB C kunye nezihlanganisi bezisemarikeni ixesha elide kwaye iApple yaqala ukumiliselwa kwayo ngokufika kwe ...
U-Evernote uvumela ukusebenzisa ii-AirPods ukukhuphela ilizwi ukuya kwisicatshulwa kuhlaziyo lwamva nje
Inkqubo ye-Evernote iOS ihlaziyiwe ngeempawu ezintsha kunye nezixhasi. Eyona nto ibaluleke kakhulu kukuba ngoku ungasebenzisa ii-AirPods zakho ukongeza amanqaku ngelizwi lakho
I-PUBG Mobile ifikelela kwizigidi ezili-10 zabasebenzisi abasebenzayo
I-PUBG iye yaba yeyona midlalo ikhutshelweyo kakhulu kwimbali kwaye sele inezigidi ezili-10 zabasebenzisi bemihla ngemihla.
I-HUD enokwenziwa ngokwezifiso ifika kuhlaziyo olutsha lwe-Fortnite ye-iOS
Ukulandela izicelo zomsebenzisi, abafana beMidlalo ye-Epic bongeza amandla okwenza i-Fortnite HUD kuhlobo olutsha lwe-Fortnite ye-iOS.
Iphuli likaGqirha Panda, yasimahla ixesha elilinganiselweyo
Ukusukela namhlanje kunye nexesha elilinganiselweyo, sinokuzikhuphelela simahla kumdlalo wePhuli kaGqirha uPanda, isicelo apho abancinci kuya kufuneka banakekele izilwanyana ezi-5 ngelixa bonwabela iphuli nakho konke okubandakanya.
Ngotshintsho olulandelayo kuWhatsApp, nje ukuba ushiye iqela leWhatsApp, abayi kuba nakho ukongeza kwakhona
I-WhatsApp ibonakala ngathi iqalile ukubona ukubaluleka kwamaqela kubantu abaninzi, kwaye uhlaziyo lwamva luya kuqala ukongeza eminye yemisebenzi esele ikho kwiTelegram ukuphucula ulawulo nokusebenza kwayo.
Itrone yentsimbi, yilwela ukuba ngukumkani phakathi kwabadlali abavela kwihlabathi liphela
Itrone yentsimbi iyafumaneka ngoku, iMetmarble MMO yamva nje apho kuya kufuneka ujongane nenqwaba yabadlali ngexesha lokwenyani lokuba ngukumkani weSitrone seNsimbi.
Ngoku iyafumaneka kwi-PUBG imephu entsha yentlango yaseMiramar kunye nenani elikhulu leempawu ezintsha
Umdlalo wohlobo lwe-Royal Royal, i-PUBG kuhlobo lwayo lwezixhobo eziphathwayo sele ihlaziywa nje ngokongeza imephu entsha ye-Miramar, imephu ebesele ikhona kwiikhompyuter nakwi-Xbox.
Dlala i-Star Wars Holochess nge-iPhone yakho
Enkosi kwi-iPhone yakho kunye nesicelo seDisney, ungadlala i-Star Wars Holochess simahla usebenzisa inyani eyongeziweyo.
"Imowudi yemfazwe" yePUBG inokufumaneka kungekudala kwi-iOS
I-Beta 0.6.3 entsha yomdlalo owaziwayo wePUBG ofumanekayo kwabo basebenzisi ababhaliswe ngokukodwa kwi ...
UMiitomo uthi ndlela ntle ngokuqinisekileyo
Umdlalo wokuqala weNintendo kumaqonga eselfowuni ugqibile ukuvalelisa ngenxa yempumelelo encinci ebenayo, kwiminyaka emibini edlulileyo ukusungulwa kwayo.
I-Apple iya kuthengisa ukubhaliselwa kweenkonzo zokusasaza kusetyenziswa i-TV
Ukuqala kunyaka olandelayo, ngokwamahemuhemu amva nje, iApple ingaqala ukukhuthaza ukuhanjiswa kweenkonzo zevidiyo kusetyenziswa i-TV
Iifoto zikaGoogle ziya kusivumela ukuba sifake imibala kwiifoto ezimnyama nezimhlophe, susa imvelaphi kunye nokunye okuninzi
UGoogle uveze ezinye zeendaba ezilandelayo eziza kuza ngohlobo lohlaziyo lwezixhobo ze-iOS kunye ne-Android yenkonzo yeefoto zikaGoogle
I-WhatsApp ihlaziywa ngokufaka inkxaso kwiividiyo kwiifestile ezidadayo ze-Instagram kunye ne-Facebook
Isicelo sokuthumela imiyalezo kuWhatsApp sikhuphe nje uhlaziyo olutsha olubandakanya izinto ezininzi ezintsha ezinxulumene nokudlala ividiyo kwifestile edadayo kunye neenketho ezintsha zabalawuli.
Ukuqala ngoJulayi, zonke ii -apps ezintsha kufuneka zilungiselelwe i-iPhone X
Ukuqala ngoJulayi walo nyaka, zonke izicelo ezintsha ezifika kwiVenkile yeApple kufuneka zenziwe nge-iOS 11 SDK, ukubonisa ukungqinelana nenotshi kunye nescreen seRetina isikrini se-iPhone X
UGoogle wongeza into ebilindelwe kudala ilindile kwi-app ye-Gmail ye-iOS
UGoogle wongeza kwi-app ye-Gmail ye-iOS yenye yezona zinto zilindelweyo ngabo bonke abasebenzisi, ngoku sinako ukuhlehlisa ii-imeyile ukuze sizifumane ngomnye umhla kunye nexesha.
Halide, yongeza inkxaso kwi-Apple Watch, isibali xesha kunye nokunye okuninzi
Ukuba sifuna ukufumana okuninzi kwi-iPhone yethu xa sithatha imifanekiso, esinye sezona zicelo zibalaseleyo zifumaneka kwiVenkile ye App nguHalide, isicelo esinexabiso le-6,99 euros.
I-Apple Podcast idlula kwi-50.000 yezigidi ezikhutshelweyo
Ii-podcast ze-Apple zisanda kudlula kwi-50.000 yezigidi ezikhutshelweyo kunye nokukhula okulindelweyo kukunyuka ngenxa yolu hlobo lwentlupheko.
I-Apple ihlawula iindawo ezithile zokubonelela ngesiqulatho esisodwa kwiApple News
Iqonga leendaba leApple News, lifuna ukubangumlinganiso wencwadi yokutshekisha kwaye sele iqalile ukuhlawula abapapashi abohlukeneyo ukubonisa umxholo okhethekileyo.
I-Opera VPN ithi ndlelantle, kodwa nazi ezinye iindlela
I-Opera, esona sikhangeli sinye, ivale usetyenziso lwayo lweVPN ye-iOS, i-Opera VPN. Kodwa ndikubonisa iindlela ezimbini ezilungileyo kakhulu.
Iimfazwe zeNkwenkwezi: Igalari yeHlabathi ngumdlalo wanamhlanje wosuku
Kungenzeka njani ukuba kungenjalo, namhlanje kwivenkile yesicelo ye-iOS esinayo njengomdlalo wosuku: ...
I-Instagram ilungiselela ukuphehlelela ukuthengwa kwemveliso yangaphakathi nohlelo
I-Instagram ilungiselela ukwenza hit enkulu etafileni ngokwazisa ngeentlawulo zemveliso ngesicelo sayo senethiwekhi yoluntu.
I-Outlook ye-iOS iya kufumana amanqaku amatsha kungekudala
UMicrosoft ubhengeze ezinye zeendaba ezizayo eziza kuthi zombini isicelo se-iOS kunye nohlobo lwewebhu kwiiveki ezimbalwa.
I-Spotify ifikelela kubabhalisi abahlawulayo abazizigidi ezingama-75
Abafana abavela kwiSpotify baphawula inyathelo elitsha lokufikelela kubasebenzisi abazizigidi ezingama-75 abahlawula kunye ne-170 yezigidi zabasebenzisi abasebenza eqongeni.
I-Fortnite ikhaba ixesha lesine ngeendawo ezintsha kunye neempawu
Uhlaziyo lwamva nje lwe-Fortnite lusinika indawo entsha ngenxa yokuwa kwe-comet ethe yaphazamiseka kwisiqithi.
Umsunguli weWhatsApp uyeke i-Facebook ngenxa yemicimbi yokukhuselwa kwedatha
Umseki-ntsebenziswano weWhatsApp ugqiba kwelokuba ashiye uFacebook emva kwengxaki zenkampani ngokuvuza kwedatha kwinkampani yeCambridge Analytica.
INintendo iyaqhubeka nokubheja kwi-iOS kwaye iya kuphehlelela inyathelo lomdlalo weRPG uDragalia Lost
Ngombono wokuqhubeka nokukhula kwintengiso ye-smartphone, uNintendo uzokwazisa uMario Kart odumileyo ngo-2019 kwaye kulo nyaka umdlalo weRPG umdlalo weDragalia Lost, oya kuba nefuthe elikhulu kwintengiso yaseAsia.
U-Spotify uyathemba ukuba i-Europe izakuyixhasa ekulweni i-Apple Music
U-Spotify unamathemba aphawulwe eYurophu ukubenza bathobele izicelo zabo kumlo wabo ne-Apple Music
I-Google Snapseed ekugqibeleni iyahambelana nesikrini se-iPhone X
Umhleli wefoto kaGoogle, uSnapseed, ekugqibeleni ufumene uhlaziyo oluvumela ukuba lube yi-100% ehambelana nescreen se-5,8-intshi ye-iPhone X
UHarry Potter: I-Howarts Mistery iphumile ngoku, kodwa iya kukwenza ube nomsindo malunga nee-micropayments
Eli ayiloxesha lokuqala ukuba umdlalo wevidiyo okanye ukumiliselwa kwesoftware enkulu kukhathazwe ...
IAmazon ihlaziya usetyenziso ukuze ihambelane nescreen se-iPhone X
Isicelo se-Alexa, esinokulawula kunye nokunxibelelana nezixhobo zeAmazon Echo, ekugqibeleni sihlaziyiwe kwiscreen se-5,8-intshi nge-notch ye-iPhone X.
I-RememBear ngoku isemthethweni
Kuthi sonke ebesilinde ukumiliselwa ngokusesikweni kweRemembear, umphathi wegama elithembisayo, ilapha kwaye ndiza kukuxelela zonke iinkcukacha.
I-Snapchat ayinikezeli, ivavanya ujongano olutsha lwamabali ayo
Abafana abavela kwi-Snapchat bayamelana nokunyuka kwe-Instagram bezama ngazo zonke iindlela ukwanelisa abasebenzisi babo ngokongeza inkqubo entsha yamabali.
I-Fortnite ihlaziywa ngokudibanisa i-limpet grenade kunye neqhosha elitsha lokudubula
Abafana kwiMidlalo ye-Epic bayaqhubeka nokuhlaziya usetyenziso kwaye bongeze isixhobo esitsha: i-limpet grenade, isiqhushumbisi ukuba wakube ubethe umphezulu akunakwenzeka ukuba ususe.
Inkqubo ye-eBay isivumela ukuba songeze iimveliso ngokuskena ibhakhowudi
Isicelo sokuthengisa iimveliso nge-Intanethi, i-eBay, sifumene nje umsebenzi omtsha osivumela ukuba songeze izinto zokuthengisa ngebhakhowudi kuphela.
Ngoku singathumela iifoto kunye neevidiyo ngemiyalezo nge-Twitterrific
Uhlaziyo lwamva nje lwe-Twitterrific ye-iOS kunye neMacOS ekugqibeleni isivumela ukuba sithumele iifoto kunye neevidiyo ngomyalezo othe ngqo.
7 web, eyona ndlela yokufikelela ngqo kumaphepha akho ewebhu awathandayo kwangoko
Iwebhu ye-7 sisicelo sasimahla esihambelana ne-iPhpne kunye ne-iPad ekuvumela ukufikelela ngokuthe ngqo kumxholo wamaphepha e-7 e-web okanye i-portals ogqibe kuzo.
I-Fortnite ihlaziywa ngemowudi entsha yomdlalo kunye nesixhobo esitsha
Ukulandela ukususwa kwemijukujelwa ekhokelwayo, i-Battle Royale ihlaziye i-app yayo ye-Fortnite yeVenkile yeApple ngokongeza isixhobo esitsha kunye nokuvumela abasebenzisi ukuba badlale indlela entsha.
IPUBG ye-iOS ihlaziywa ngemowudi ye-arcade kunye nophuculo oluninzi
Ukufika kwamvanje kwiVenkile yeApple ye-iOS kuzisa, phakathi kwezinye izinto, imowudi entsha ye-arcade enamandla ngakumbi kwaye kulula ukudlala ngayo ukuthatha ixesha elifutshane, kodwa ayizizo kuphela izinto ezintsha.
I-Apple inokunyusa ukhuphelo lweapps yakho ukuya kuthi ga kwi-800%, ukuba ukhetha
Iiapps ezikhethwe yiApple ukubonakala kwiVenkile yeVenkile zinokunyusa ukhuphelo lwakho ukuya kuthi ga kuma-800% ngeveki
Umjikelo wokulala uza neendaba kwiApple Watch ukujonga ukulala kwakho
Isicelo segqala kunye nesithandwayo kweli candelo lokulinganisa umhlaba yiSeleep Cycle, kwaye ngoku ikhona izinto ezithile ezintsha kwiApple Watch.
INetflix ngoku ibonisa iziqwengana ezithe nkqo zomxholo wayo imizuzwana engamashumi amathathu
Ingxaki yokuma nkqo kweevidiyo isonjululwe yiNetflix eza kuthi ngoku ibonise imizuzwana engamashumi amathathu yevidiyo kule fomathi.
Ubukrelekrele bobugcisa buza kuMguqululi kaMicrosoft
Enkosi kubukrelekrele bokuzenzela, uMguquli kaMicrosoft ngoku unamandla kwaye ubukrelekrele kwaye uyasivumela ukuba siyisebenzise ngaphandle konxibelelwano lwe-Intanethi.
Idropbox ekugqibeleni ixhasa ukurhuqa kunye nokulahla i-iPad
Inkonzo yokugcina ilifu yeDropbox ihlaziyiwe nje yongeza inkxaso yokutsala kunye nokwehla komsebenzi oza kwi-iOS kunye nohlobo lweshumi elinanye.
Uyifumana njani imeko yewaranti yakho ye-iPhone ngokusebenzisa i-Apple Support app
UApple ubonelela ngeapp ye-iOS -iPhone kunye ne-iPad- evela kwiNkxaso yeApple. Ngayo ungajonga iwaranti yezixhobo zakho ngokukhawuleza nangokulula
I-Fortnite iqala yomelele, iirhafu zayo zerhafu ziye kwi- $ 25 yezigidi ngenyanga
I-Fortnite iyaqhubeka nokophula iirekhodi. Une-buzz eninzi ngenkqubo yoluhlu lokulinda, kwaye ngoku ukwazile ukufikelela kwizigidi ezingama-25 zeedola kwinyanga yakhe yokuqala.
Qhubeka ne-Orbia, umdlalo we-iOS olutha ngomatshini olula
Umdlalo ubizwa ngokuba yiOrbia kwaye uya kukwenza ube nexesha elimnandi kunye ne-iPhone yakho ngaphandle kweengxaki ezininzi, umdlalo oqhelekileyo ekulula ukuwenza kodwa kunzima ukuwulawula.
IRashiya icela iApple ukuba isuse usetyenziso lweTelegram kwiVenkile yeApp
Urhulumente waseRussia ucele iApple ukuba isuse isicelo seTelegram kwivenkile yaseRussia, emva kokuvimba ukusetyenziswa kwesicelo kweli lizwe.
Olu luhlobo olutsha lweSpotify
Kunye nazo zonke iindaba kunye nohlaziyo oluvela kwiSpotify mva nje, abambalwa kuthi bafikelele kuyilo olutsha lweSpotify kwaye siza kukubonisa lona.
I-Chrome ye-iOS isivumela ukuba sithumele ngaphandle amagama agqithisiweyo
Uhlaziyo lwamva nje lweChannel ye-iOS, ekugqibeleni isivumela ukuba sithumele onke amagama agqithisiweyo agcinwe kwisikhangeli sethu kwifayile ye-.cv
Indlela yokongeza izitikha kwiTelegram
Ukuba udiniwe kukusoloko usebenzisa izincamathelisi ezifanayo, kweli nqaku sikubonisa ukuba singazongeza njani izitikha ezintsha kwisicelo somyalezo weTelegram.
I-Spotify iyakuhlaziya ngokupheleleyo ukusetyenziswa kwayo ukongeza ulawulo lwezwi
Inkampani yaseSweden i-Spotify ingabonisa kule veki izayo, kumsitho ocwangciselwe u-Epreli 24, uhlaziyo olupheleleyo lwesicelo sayo kwizixhobo zefowuni ezibandakanya umncedisi welizwi.
Ushicilelo lwesibini lweTouchgrind BMX lufika kwiAppStore kunye nokuphumelela
Ngoku inguqulelo yedijithali yolu hlobo lomdlalo ophumeleleyo kwiVenkile yeApple ngeTouchgrind BMX 2, umdlalo apho ungayilungisa khona i-BMX yakho encinci kwaye ube nexesha elimnandi.
Doppler, usetyenziso lomculo ngaphandle kweintanethi kwi-iPhone yakho ethembisa ukungqamanisa ngaphandle kweTunes kwixa elizayo
I-Doppler sisicelo esitsha se-iPhone esiya kukuvumela ukuba ulawule ilayibrari yakho yomculo ngaphandle kweintanethi. Ukongeza, ithembisa ngolungelelwaniso lomxholo wexesha elizayo ngaphandle kwesidingo seTunes
IMovie ihlaziywa ngenkxaso yescreen seRetina yesikrini se-iPhone X
Umhleli wevidiyo ka-Apple, iMovie, usandula ukufumana uhlaziyo olutsha olwenza ukuba luhambelane ne-iPhone X ukongeza ekunikezeleni ngenkxaso kwi-Metal.
Ayinguwe wedwa, iFortnite yehle iiyure ezili-12
Ngexesha lokupapasha eli nqaku, umdlalo odumileyo Fortnite khange usebenze iiyure ezili-12, ngelo xesha iiseva ziyeke ukusebenza.
I-Fortnite ihlaziywa ngokudibanisa into entsha: i-fort ephathekayo
Abafana kwiMidlalo ye-Epic basandula ukukhupha uhlaziyo olutsha lwe-Fortnite apho badibanisa into entsha: i-fort ephathekayo.
I-Spotify ifuna ukwandisa ukhetho lwenguqulo yasimahla
NgokukaBloomberg, uguqulelo olukhululekileyo lweSpotify lunokufumana uphuculo olubalulekileyo kuhlaziyo lwexesha elizayo.
USteve Wozniak uvale iakhawunti yakhe ye-Facebook emva kwehlazo leCambridge Analytica
USteve Wozniak, umsunguli we-Apple uthi lifikile ixesha lokuvala iakhawunti yakhe kwinethiwekhi yoluntu ye-Facebook.
IFirefox ihlaziywa ngokwenza ukhuseleko lokulandela umkhondo ngokungagqibekanga
Uhlaziyo lwamva nje lweFirefox ye-iOS, yenza ukuba kukhuselwe umkhondo ngokungagqibekanga, ukuze sikwazi ukuhamba noxolo lwengqondo ngaphandle kokukhumbula ukwenza lo msebenzi.
UGqr Umcoci, susa abafowunelwa abaphindiweyo kunye neefoto kwi-iPhone yakho
UGqr Umcoci sisicelo se-iOS -iPhone kunye ne-iPad- ekuvumela ukuba ucime iikopi zeefoto kunye nabantu onxibelelana nabo kwaye ke unokugcina simahla.
I-HomePass, usetyenziso oluthi i-Apple yalibala ukulongeza kwiKhayaKit
I-HomePass yeKhayaKit yinto ekufuneka uyenzile-ukuba unayo i-app kwabo banezinto ezizenzekelayo ze-Apple kwaye abafuni kuba nengxaki yokuphulukana neekhowudi zokuvula.
Umxholo wabantwana bakaYouTube uya kujongwa ngabantu hayi izilungelelwaniso njengangaphambili
Kwezi nyanga zidlulileyo, uninzi lwethu lubengabazali abayekile ukuvumela abantwana bethu ukuba basebenzise ...
UApple usinika umdlalo wephazili weStarman kusetyenziswa iVenkile yeApple
Ukuba ufuna ukugcina ii-euro ezingama-4,49 ezithi umdlalo weStarman weendleko ze-iOS, ungasebenzisa ithuba lokuba iApple isivumela ukuba siyikhuphele simahla ngokusebenzisa iVenkile yeApple.
Dlulisa iLizwi 2, imidlalo yamagama emincinci yabo bonke abasebenzisi
Dlulisa iLizwi 2, ukhetho lwee-minigames zamagama ophuhliso lweSpanish anokukwenza ube nexesha elimnandi ngendlela elula nefanelekileyo.
Ngoku ungadlala iFortnite kwi-iPhone yakho nakwi-iPad ngaphandle kwesimemo
Ibe yenye yezona zinto zidumileyo zokukhutshwa konyaka. Umdlalo obutshayela iikhonsoli zevidiyo okwexeshana ...
I-Adobe Photoshop Express ihlaziywa ngeendlela ezintsha xa ugcina imifanekiso
Umhleli wesithombe esimnandi weAdobe Photoshop Expres usandula ukuvuselelwa esongeza into ekufuneka yenziwe ngabasebenzisi abaninzi besicelo xa begcina iifoto zabo ezihleliweyo.
I-PUBG ihlaziywa ngeelwimi ezintsha, kubandakanya iSpanish
Umdlalo wePUBG ufumene uhlaziyo olutsha apho ekugqibeleni luyafumaneka ngeSpanish, ukongeza ekuphuculeni ukusebenza kwizixhobo ezindala.
UMarvel Strike Force ufika ukuze ukonwabele amaqhawe akho owathandayo kwi-iPhone yakho
Sivavanye umdlalo wevidiyo ofike kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo kwiVenkile yeApp ye-iOS ukuze ukhethe amaqhawe akho owathandayo kwaye usebenze kunye ukugqibezela uthumo lwabo.
I-Apple isungula usetyenziso lweTV eMexico
U-Apple usandula ukwazisa usetyenziso lweTV eMexico, ukudibanisa usetyenziso olunye lweenkonzo zokuhambisa onazo kwisixhobo sakho.
Izicelo ezihambelana ne-ARKit, ngakumbi imidlalo, iqokelela ukhuphelo lwezigidi ezili-13
Kwiinyanga ezintandathu emva kokumiliselwa kwe-iOS 11, kunye neqonga lokwenyani le-ARKit, ukhuphelo oluqokelelweyo lwemidlalo ehambelanayo kunye neeapps lufikelela kwizigidi ezili-13.
I-Mini Golf King, yeyona midlalo ilungileyo yegalufa ifumaneka kwiVenkile ye App
Ukuba sijonge umdlalo ukonwabela iMini yeGalufa, uKing Golf Mini yenye yezona midlalo zibalaseleyo sinokuzifumana kwiVenkile ye App namhlanje.
Amaphepha, amanani kunye ne-Keynote nayo ihlaziywa ngezinto ezintsha
Abafana bendawo abavela eCupertino basebenzise ithuba lokubhiyozela intetho ephambili ye-iPad 2018 yokuqalisa uthotho lwezicelo zabo ezijolise kwicandelo lezemfundo, nangona kungenjalo kuphela
Iiklip kunye neGarageBand zihlaziywa ngeempawu ezintsha zemfundo
U-Apple ukhuphe uhlaziyo olutsha kwiziklipthi kunye nokusetyenziswa kweGarageBand, apho sifumana khona imisebenzi emitsha ejolise kwimfundo.
IiBooks zinokuza kwi-iOS 12 ngenkangeleko kwaye ziziva zifana neVenkile yeApple
Yonke into ibonakala ibonisa ukuba ivenkile yeencwadi zika-Apple, ii-iBooks zinokufumana uhlengahlengiso olukhulu ngokufika kwe-iOS 12, ngokusebenza ngokufana nokubonakala kweVenkile yeApp.
Uhlelo lokusebenza lwe-Android Wear lubizwa ngokuba yi-Wear OS
Emva kokutshintsha kwegama ngokusemthethweni, ukusuka kwi-Android Wear ukuya kwi-Wear OS, uGoogle usandula ukukhupha uhlaziyo lwesicelo esele lisibonisile igama
Iimaphu zikaGoogle zihlaziywa kwaye zikunceda xa ugcina itafile kwindawo yokutyela oyithandayo
Iimephu zikaGoogle ze-iOS zongeza ukusebenza okutsha: ngoku siza kuba nolwazi lwexesha langempela malunga nenqanaba leeresityu esifuna ukuzityelela
I-PUBG Iselfowuni ibangela uvakalelo kunye nokufaneleka kwayo
I-PUBG yezixhobo eziphathwayo ngoku iyafumaneka kwaye yeyona ndlela ilungileyo (okanye ukongeza) kwi-Fortnite, ukugqitha kwinyani nakwimidlalo yokudlala.
Inkqubo yeVenkile yeApple iphantse yahlaziywa ngokupheleleyo
Isicelo seVenkile ye-Apple siye sahlaziywa emva kohlaziyo lokugqibela lokongeza iithebhu ezintsha kunye nokususa ezinye zezona zisetyenziswa kakhulu ngabasebenzisi.
Yocingo ifikelela kubasebenzisi abazizigidi ezingama-200 ngohlaziyo olutsha nolunomdla
Isicelo seTelegram sifumene uhlaziyo olutsha ngenani elikhulu leendaba, ukubhiyozela ukuba bafikelele kubasebenzisi abazizigidi ezingama-200.
Cola 2 ngoku iyafumaneka kwi-iPad
Emva kokuphumelela kwi-Mac, babhengeza usetyenziso lwabo lwe-iOS kwakudala. Ngoku ukuba luhlelo olupapashwe kwiVenkile ye App, inqanaba lohlaziyo luhlala luhleli kwaye uphuculo luyamangalisa.
Isikhokelo se-Fortnite sabaqalayo, okanye indlela yokuhlala ngaphezulu komzuzu kumdlalo wonyaka
Iingcebiso ezisisiseko kwabo batsha kwi-Fortnite kwaye bafuna ukonwabela lo mdlalo obangela uvakalelo. Ungaphi emhlabeni, ziphi izixhobo oza kuzithatha ... yonke into oyifunayo ukuthintela ukubulawa kwakamsinya emva kokuba ufikile.
Ungayicima njani iakhawunti ye-Facebook
Ukhuseleko luka-Facebook kunye nemfihlo ziyathotywa. Apha sichaza ukuba ungayicima njani okwethutyana kwaye uyicime njani iakhawunti yakho ye-Facebook.
Uhlobo lwe-iPad ngoku luxhasa ukuBonwa okuHluliweyo
Isicelo se-Kindle se-iPad sihlaziyiwe nje ukuze ngoku sihambelane nomsebenzi okhethekileyo we-iPad Split Screen.
I-Fortnite ifezekisa ingeniso ye- $ 1,5 yezigidi kwiintsuku nje ezi-5
Asithandabuzi ukuba ngumdlalo otshayela iVenkile yeApple ngoku kwaye ngu ...
ICleaner Pro, isicelo sokucoca inkunkuma kunye nokwenza ngcono i-iPhone yethu, ngoku iyahambelana ne-iOS 11
I-tweak emnandi, iCleaner Pro, sele ikho nge-iOS 11, ke ukuba ubulindele umzuzu wokucoca i-terminal yakho, ungayenza ngaphandle kweengxaki zokuhambelana.
Iilensi zikaGoogle ngoku ziyafumaneka kwi-iPhone nakwi-iPad
Ubukrelekrele bokwenza into kuGoogle buza kwi-iOS. Kwaye yenza njalo ngeGoogle Lens, omnye wemisebenzi eya kukunika ulwazi ngakumbi malunga neefoto zakho.
I-Spotify iya kukhangela ngelizwi ukukubuza umculo kwi-iPhone
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo sibonile ukuba uSpotify angadlala njani ngombono wokumilisela owakhe isithethi, kwaye abe, kweso sithethi, yintoni iApple Music kwiPodPod yasekhaya. Ukuba ufumana isithethi sakho, kuyacaca ukuba iya kuba nendlela yokunxibelelana, kwaye kubonakala ngathi yonke into ibonisa ukuba iya kuba nelizwi lethu.
INiantic ngoku isivumela ukuba singene kwiPokémon GO ngeakhawunti yethu kaFacebook noGoogle
U-Niantic, umphuhlisi wePokémon GO, sele ekuvumela ukuba udibanise zombini i-Facebook kunye neakhawunti kaGoogle.
Ukudlala iFortnite nge-iPhone X
I-Fortnite ngoku iyafumaneka kwi-iOS nakwiiNdaba ze-iPhone siye sakwazi ukuyivavanya. Sikubonisa kwividiyo ukuba isebenza njani kwi-iPhone X
I-Swiftkey ivula ibar yesixhobo kuhlaziyo lwayo lwamva nje
Ikhibhodi yeMicrosoft, iSwiftkey isandula ukuhlaziywa, ukuphucula ukusebenza kwayo nangakumbi ukuba kunokwenzeka kunye nenani lezikhetho elisinike lona ukuza kuthi ga ngoku.
I-Fortnite ye-iOS ngoku iyafumaneka, sikubonisa ukuba usifumana njani isimemo sokudlala
Abafana abavela kwimidlalo ye-Epic basungula i-Fortnite ye-iOS, ewe, kuya kufuneka silinde umgca wokudlala. Sikuxelela ukuba ungaqala njani ukudlala i-Fortnite ye-iOS.
I-WhatsApp ayizokwabelana ngolwazi lwakho ne-Facebook, okwangoku ...
Abafana abavela kuFacebook bathembisa ukuba i-WhatsApp ayizokwabelana ngedatha nabo de bafezekise iimfuno zommiselo waseYurophu.
Thatha i-clipboard yakho naphina ngokuncamathisela 2, ngoku iyafumaneka kwi-iOS
Isicelo seMac, Cola 2, sele sifikile nakwi-iOS, ukuze sikwazi ukubonisana nayo yonke imixholo egcinwe kwi-Mac yethu kwi-iPhone yethu, kungenjalo.
Sichaza indlela yokuvimba abasebenzisi kwiTelegram. Wazi njani ukuba uvaliwe kwaye, ukongeza, ukuxela abasebenzisi, amajelo kunye namaqela njengogaxekile.
Inkqubo edumileyo yeOvercast podcast ihlaziywa ngokongeza umsebenzi omtsha onomdla owushwankathela iipodcast esizimameleyo.
Ukuba udiniwe kukufumana imiyalezo ngeMessage evela kumthumeli siyaziwa kwaye sigcinwe kwi-ajenda yethu, kweli nqaku sikubonisa ukuba ungayiphepha njani.
Uhlelo lokusebenza lwe-Google Assistant ngoku luyahambelana ne-iPad
Umncedisi kaGoogle, uMncedisi kaGoogle, ungene nje kwi-iPad, ukuze sikwazi ukuyisebenzisa kwi-iPad yethu nangaliphi na ixesha.
Umbhalo, yenza kwaye uhlele iitekisi ze-TXT kwi-iPhone nakwi-iPad simahla
Ngaba ujonga umhleli wombhalo ocacileyo we-iPhone yakho okanye i-iPad? Ukuba une-iOS 11 efakwe kwikhompyuter yakho, iTextor yile nto ubuyikhangela
Isicelo se-Alexa se-iPad sikuvumela ukuba wenze iifowuni kwiAmazon Echo kwi-iPad
Uhlaziyo lwamva nje lwesicelo se-Alexa esivumela ukuba senze iminxeba yelizwi phakathi kwe-iPad kunye nezixhobo zeAmazon Echo esidibene nazo.
Vimba umnxibelelwano kuWhatsApp
Sichaza into ekufuneka uyenzile ukubhloka umnxibelelwano kuWhatsApp. Ukuba inombolo iyakukhathaza kwaye ufuna ukuyivimba kuWhatsApp ukuze ingakuthumeli imiyalezo emininzi, ngala manyathelo ekufuneka uwalandele.
I-Marline, eyona app intle kakhulu ukubona amaza, inyanga kunye nemozulu
I-Marline yinkqubo apho unokujonga khona amaza, isigaba senyanga kunye nemozulu ngendlela eyahlukileyo. Ngendlela elula nebukekayo. Into endenze ndathandana ndiqala ukumbona.
Abaphathi begama eligqithisiweyo le-iOS
Ukuba usacinga ukuba abaphathi begama eligqithisiweyo abanaluncedo mihla le, apha ngezantsi ndikubonisa ukuba ngabaphi abaphathi begama eligqithisiweyo kwaye yeyiphi eyona misebenzi yabo iphambili.
I-WhatsApp yandisa ixesha onokucima ngalo imiyalezo
I-Apple inyusa ixesha esinokuthi sicime ngalo. Sichaza indlela yokwenza kwaye ke siphephe iingxaki ngenxa yemiyalezo engeyiyo.
IMacTracker sele isinike ulwazi malunga neKhayaPod
Isicelo seMacTracker sihlaziyiwe songeza lonke ulwazi olunxulumene nemveliso yakutshanje ephehlelelwe yi-Apple kwintengiso, i-HomePod.
Elk, isiguquli esikhulu semali kunye neqhinga elikhulu
Kukho izicelo ezenziwe kakuhle kwaye zintle kangangokuba kulihlazo ukungazisebenzisi rhoqo. Elk yenye yezoapps kum. Umsebenzi wawo kuphela kukuguqula iimali kwaye ayisiyonto ndiyifunayo kubomi bam bemihla ngemihla.
Bobby, indlela elula yokugcina umkhondo kwimirhumo yakho
UBobby ngumphathi wobhaliso wasimahla we-iPhone. Yeyona ndlela ilungileyo yokugcina zonke iintlawulo onazo zeenkonzo zihlaziyiwe
I-Snapchat kunye ne-Instagram Stories ziya kufumaneka kwi-Netflix
Abafana kwiNetflix, kude nokushiya isicelo sabo, baqhubeke nokongeza imisebenzi emitsha enje ngobutsha obuzakufika kwiiveki ezimbalwa, Amabali eNetflix, indlela ekhawulezayo nelula yokubonisana nomxholo omtsha ngaphandle kokuguqula i-smartphone
UGoogle ukhuthaza uSuku lukaMario nge-10 kaMatshi kwiimephu zikaGoogle
Abafana abavela kuGoogle bakulungele ukubhiyozela uSuku lukaMario ngokuba ngomnye umlinganiswa odumileyo uMario Kart kwiiMephu zikaGoogle.
Ukutyhilwa kuphakamisa amabali akho e-Instagram kwinqanaba elinomtsalane
Okona kubasebenzisi be-Instagram bafuna kakhulu, ukuZalwa kuyazalwa, isicelo onokuthi wenze amabali e-Instagram anomdla ngakumbi nangakumbi.
Ukuhamba komsebenzi kuyahlaziywa ngokudibanisa umsebenzi wemaski yomfanekiso
Ukuhamba komsebenzi, isicelo esivumela ukuba senze imisebenzi kwi-iPhone, i-iPad kunye ne-Apple Watch, isandula kufumana uhlaziyo olutsha ngesigqubuthelo somfanekiso esitsha.
Fumana iSuper Mario Run ngesiqingatha sexabiso ngenxa yokukhuthazwa kweNintendo
INintendo ibhengeze intengiso entsha yeSuper Mario Run, ukuthengisa okuza kuqala ngo-Matshi 10 kwaye kuya kufumaneka kude kube ngama-25.
Iimephu zikaGoogle zongeza ukuJongwa kwesitrato kwiipaki zomxholo weDisney ezili-11
Abafana abakwiMephu zikaGoogle bongeza iipaki zemixholo edumileyo eDisney eUnited States kwiStreet View ukuze sikwazi ukuhamba-hamba ngokuthanda kwethu.
I-Halide, isicelo esidumileyo sokufota sihlaziywa ngezinto ezininzi ezintsha
IHalide ayiphoswa lithuba lokuzihlaziya ngokwayo ukutsala abasebenzisi abangakumbi nangakumbi kwiqonga layo, ezi ziindaba ezibandakanya ngoku.
Isicelo seGoogle sifumana imisebenzi emitsha yokukhangela
Uhlelo lokusebenza lukaGoogle lufumene nje izinto ezintsha ukuze sikwazi ukufumana okungakumbi kuyo nge-Messages app.
Yiza neKhaya lakho, umdlalo weqonga omangalisayo kuwo wonke umntu
Yiza neKhaya lakho, umdlalo weqonga omtsha ophumeleleyo kuzo zonke ezona zicelo ziphezulu kwaye oko kumnandi kakhulu.
I-Spotify ithintela ukusetyenziswa kweapps ezingagunyaziswanga
Abanye abali-88 lezigidi zabasebenzisi beSpotify basebenzisa iakhawunti yasimahla, kwaye kwezi, kubonakala ngathi iqela lisebenzisa iinguqulelo eziguqulweyo zeSpotify ezivumela ukudlula kwimida yale nkonzo yasimahla.
I-Waze ihlaziywa ngokongeza ukuphuculwa kwesishwankathelo sendlela
Abafana eWaze bahlaziya esinye sezona zikhangeli zibalaseleyo ze-iOS ngokuphucula isikrini se-ETA apho sinokubona isishwankathelo sendlela esiza kuyithatha.
Umdlalo oPhezulu oPhezulu, umdlalo olula kodwa umlutha malunga nemibuzo
Uphendlo lukaGoogle lubonisa imihla ngemihla zeziphi ezona zinto zibalulekileyo kunye neenkxalabo zabantu kwihlabathi liphela. Nangona kunjalo, akukaze kwenzeke kuthi ngaphambili ukwenza lo mdlalo wevidiyo okanye imveliso yolonwabo njengoMdlalo oPhezulu oPhezulu.
Ukukhumbula, okokugqibela, umphathi wegama eligqithisiweyo ebendilifuna
I-Remembear yinkqubo yokulawula kunye nokwenza iiphasiwedi ezivela kubadali beTunnelBear, enye yeenkonzo ezilungileyo zeVPN endizamile.
UGoogle uqinisekisa ukuba kuyasebenza ukuhlaziya i-inbox app kwi-iPhone X
Isicelo se-Inbox kaGoogle, efuna ukuba sigcine i-inbox yethu, asihlaziywa kwi-iPhone X, nangona ngokwenkampani isebenza kuyo.
I-Calzy 3, ayisiyonto enye yokubala ye-iOS
Ngaba ufuna i-app yokubala isixhobo sakho se-iOS? Ewe, jonga iCalzy 3, ikhalityhuleyitha engayi kukushiya ungakhathali
Abaphembeleli abaliqela bafuna ikhwenkwe ngokuchasene neApple ngokusetyenziswa kweNational Rifle Association
Abadlali abaninzi baseMelika sele beqalisile ukucela ukuba boyike i-Apple, okungenani usuku olunye, ukususa isicelo se-Apple TV kulo mbutho.
Umsebenzi wokugcina ii-tweets kwi-Twitter ngoku ziyafumaneka kwi-app esemthethweni
Umsebenzi wokugcina iitweets zokufunda kamva ngokuthe ngqo kwisicelo se-Twitter ngoku uyafumaneka kuye wonke umntu. Sikubonisa ukuba isebenza njani.
I-Google Drayivu yandisa inani leefomathi ezixhaswe sisicelo se-iOS
Inkonzo yokugcina ilifu kaGoogle inyuse nje ukuhambelana neefomathi ezingaphezulu, ukuze sikwazi ukujonga kuqala ngaphandle kokukhuphela umxholo kwaye siwuvule ngokusetyenziswa komntu wesithathu.
iTunes Store iya kuyeka ukusebenza kwiWindows XP kunye neVista ngoMeyi 25
Ukusukela nge-25 kaMeyi, i-iTunes ayisayi kuba nakho ukunxibelelana noGcino lweTunes kuzo zonke iikhompyuter ezilawulwa yiWindows Vista, ukongeza kwiWindows XP.
Ukulandela izikhalazo zomsebenzisi, iYouTube yeApple TV ihlaziywa ngokudibanisa ukujonga
Emva kwezikhalazo zomsebenzisi zokucela kwakhona igridi yobhaliso kwi-app yeYouTube yeApple TV, iYouTube iyalungisa kwaye iyenze ifumaneke kwakhona ngohlaziyo olutsha.
I-Ghostbusters iza kwi-iOS ngohlobo lwePokémon Go!
I-Ghostbusters iza kwi-iOS ngohlobo lwePokémon Go!, Isigqibo sokufaka zonke iziporho.
Omnye wabasunguli be-WhatsApp, utyala imali ezizigidi ezingama-50 zeedola kuMqondiso
Umqondiso wesicelo sonxibelelwano esikhuselekileyo, usandula kufumana inkxaso-mali yezigidi ezingama-50 zeedola komnye wabaseki be-WhatsApp
I-1Password yongeza umsebenzi oza kukuxelela ukuba igama lakho eliyimfihlo liye lavuza
1 Igama eligqithisiweyo longeza umsebenzi omtsha oza kukunceda wazi ukuba igama lakho eligqithisiweyo lilungisiwe kwiWebhu kwaye kuye kwaba ngumbulelo kumdali wenkonzo ekhutshiweyo
Mholweni. Luphawu lokusebenza olukufunayo ukuvavanya iMac.
Molo. Uyakwazi ukuxabisa iiMacs ezinesandla sokugqibela ngokungathi ubungcali. Uya kufumana ixabiso leMac ngemibuzo embalwa kwaye uya kuba ulungile nakuphi na ukuthenga nokuthengisa.
Abaphuhlisi ngoku banokubonisa ukuya kuthi ga kwisikrini esili-10 kwiiapps zabo
I-Apple ikwandisile inani lezikrini ezifumanekayo kubaphuhlisi abanokuthi bazenze njengoko isicelo sabo sisusela kwi-5 kuye kwi-10.
I-Cabify ihlaziywa ngoyilo olutsha kunye ne-graphical interface
Isicelo sesinye samandla aso, ke bathathe isigqibo sokusihlaziya ukuze sigcine ixesha laso kwaye sinikezela ngamava omsebenzisi amahle.
I-Twitterrific ihlaziywa ngokwenza ukuba ihambelane nomsebenzi wokutsala kunye nokwehla kwe-iOS 11
Isicelo se-Twitterrific sihlaziyiwe kwakhona ngokongeza umsebenzi wokutsala kunye nokwehla, umsebenzi osivumela ukuba sirhuqe umxholo we-Twitterrific uye kwenye kuphela kwi-iPad.
Incwadi iFariña ibekwe njengeyona ndawo ithengisa kakhulu kwiVenkile yeeVenkile emva kokubanjwa kwakhe
Emva kokuthimba emva kokukhalaza ngusodolophu wangaphambili u-O Grove wencwadi ethi Fariña, lo msebenzi waba yeyona ncwadi ithengwa kakhulu kwivenkile ye-iBooks.
I-Dropbox ihlaziywa ngokuphucula umsebenzi woKwabelana
Inkonzo yokugcina yeDropbox iyaqhubeka nokuphucula imisebenzi kunye nokhetho olusinika lona xa sinxibelelana neefayile esizigcinileyo kwiakhawunti yethu.
Izinto zihlaziywa ngemisebenzi emithathu emitsha nenomdla
Izinto ezi-3 zesicelo semveliso sihlaziyiwe kwinguqulelo engu-3.4 yokongeza izinto ezintathu ezinomdla kakhulu kwabo basebenzisi abangakagqibi ukuthenga iapp.
IAlto´s Odyssey ngoku iyafumaneka kwi-iPhone, i-iPad kunye ne-Apple TV
I-Alto's Odyssey namhlanje sinokuyikhuphela kwiVenkile yeApple ye-iOS kuzo zombini i-iPhone kunye ne-iPad, ewe, ukubonakala okuhle kwi-tvOS yeApple TV.
Ikhibhodi yeNuance Swype ithi ndlela ntle
Ikhibhodi yeSwype iyekile kwi-iOS nakwi-Android. UNuance, umdali, uthathe isigqibo sokugxila kwezinye izinto kwaye ayishiye.
Iqela leNike + Run lihlaziywa ngokongeza imiceli mngeni emitsha ukusishukumisela ukuba senze imidlalo emininzi
Abafana abavela eNike + Run Club bahlaziya iapps yabo ye-iOS ukuze sikwazi ukulungiselela ukusebenza kwehlobo, ukuphumelela amabhaso amatsha kunye nokukhuphisana noluntu lwaseNike +.
IKhalenda kaGoogle sele isivumela ukuba sidibanise iiakhawunti ezintathu zekhalenda
Isicelo sokulawula ikhalenda kaGoogle kwi-iPhone, kwiKhalenda kaGoogle, sihlaziyiwe sisivumela ukuba sidibanise iiakhawunti ezi-3 zikaGoogle, kunye neekhalenda zazo.
Iimephu zikaGoogle ze-iOS zihlaziywa ngamaqhosha olwazi amatsha
Iimephu zikaGoogle ze-iOS zifumana uhlaziyo olunomdla kakhulu. Isizisela iindlela ezimfutshane kwiphepha lasekhaya eliya kuthi lisivumele ukuba sibone iinkonzo, imeko yezithuthi okanye izithuthi zikawonkewonke
I-Shazam ihlaziywa ngoyilo olutsha kunye nokongeza imisebenzi emitsha
Uhlaziyo lokuqala oluphambili kuShazam okoko kuthengwe iApple, isinika ujongano lomsebenzisi omtsha kunye nemisebenzi emitsha
Ukusukela ngo-Epreli, zonke izicelo ezitsha mazilungiswe kwi-iPhone X
Zonke izicelo ezitsha ezifika kwiVenkile yeVenkile ukusukela ngenyanga ka-Epreli, kufuneka zilungiswe ewe okanye ewe kwifomathi entsha yesikrini ye-iPhone X
Umhlobo weefoto, usetyenziso olutsha lukaMicrosoft lokuthumela iifoto kwiPC
Enkosi kwisicelo esitsha seFoto Companion, ukuhambisa imifanekiso kwi-iPhone yakho okanye kwi-iPad yakho Windows 10 I-PC ilula kakhulu kwaye ngaphezu kwayo yonke into ekhawulezayo.
I-CEO yeFlipboard ithi iApple yeendaba zika-Apple isekwe ngaphambili
Ngokutsho kwe-CEO yeFlipboard, iApple iye yahlala ngaphambili nesicelo seendaba, kuba inika izibonelelo ezifanayo njengeqonga layo zombini xa kufikwa ekwabelaneni amanqaku kwaye xa kufikwa kumba wokuvelisa ingeniso.
Umxhasi weposi ye-Spark uhlaziywa ngokusombulula iimpazamo ezahlukeneyo
Omnye wabathengi bemeyile ezilungileyo ze-iOS, uSpark, usandula ukuvuselelwa esombulula inani elikhulu leengxaki eziziswe sisicelo kwiinyanga ezidlulileyo.
IAlyssey's Odyssey iza kwi-iOS nakwi-tvOS ngoFebruwari 22
Siyakhumbula ukuba iAlyssey's Odyssey ibhengeziwe ngoFebruwari 22 olandelayo emva kokulibaziseka kwayo.
IVLC ifikelela kuhlobo lwe-3.0 ngenkxaso yeefayile zeApp kunye neFaceID
Oyena mdlali wefayile yevidiyo ye-iOS, kwaye phantse naliphi na iqonga, sele ihlaziyiwe ukongeza inkxaso yeFaceID, tsala kwaye ulahle kunye nokusetyenziswa kweFayile.
Ukuzama i-Mario Kart ye-iOS kuya kuba simahla, uNintendo usebenzisa ubuchule obufanayo noboSuper Mario Run
Kubonakala ngathi inike iziphumo ezilungileyo ngeSuper Mario Run xa inkampani yaseJapan iphakamisa ukusebenzisa indlela efanayo kumdlalo wayo omtsha we-iOS esekwe kuMario Kart.
I-Twitter ivala ikota yokuqala ngenzuzo kwimbali yayo
Ngethuba lokuqala kwiminyaka eyi-12 yobukho, inethiwekhi yokuncitshiswa kwezinto ezincinci yenza inzuzo kwikota yokugqibela ye-2017.
Umphathi weposi we-Outlook uhlaziywa ngokongeza imisebenzi emitsha
Umxhasi weposi kaMicrosoft, i-Outlook, ihlaziyiwe nje ukongeza inani elikhulu leziphuculo xa ukhangela kwisicelo, uphuculo oluya kwenziwa kancinci kancinci.
Isitudiyo seYouTube sihlaziyiwe ukuze sihambelane ne-iPhone X
Uhlaziyo lwamva nje lwesicelo seStudiyo seYouTube asisiniki nje ukuhambelana ne-iPhone X, kodwa ikwasinika nophuculo ekusebenzeni kolawulo lwezimvo zeevidiyo zethu.
Umncedisi kaMicrosoft, uCortana, ngoku uyafumaneka kwi-iPad
Umncedisi kaMicrosoft, uCortana, ungene nje kwi-iPad, ukuze abasebenzisi banxibelelane nayo ngokungathi bayayenza nge Windows 10 PC, ukuba nje bebeqhuba usetyenziso.
Ukuhanjiswa koononografi kwabantwana ngeTelegram yayisisizathu sokususwa kwethutyana kwiVenkile yeApple
Kwiveki emva kokurhoxiswa okungummangaliso kwesicelo seTelegram kwiVenkile yeApple, ekugqibeleni siyazi ukuba siyintoni na isizathu, isizathu esasinxulumene nemifanekiso engamanyala yabantwana.
Abahlobo bakaSago Mini, simahla ixesha elilinganiselweyo
Umdlalo wasimahla esikubonisa wona namhlanje, ujolise kwabancinci endlwini phakathi kweminyaka emi-2 nengu-4 ubudala kwaye ubizwa ngokuba yiSago Mini Abahlobo, umdlalo wabantwana ukuba baqale ukufunda izinto ezithile zobomi.
Sichaza indlela yokukwazi ukufikelela kuWhatsApp kwiApple Watch, funda imiyalezo, ujonge iifoto okanye ubhale nemiyalezo, konke okuvela kwiApple Watch.
Khange silinde ixesha elide, i-YouTube TV ngoku iyafumaneka kwiApple TV
Abafana abavela kwi-YouTube TV ekugqibeleni basungula usetyenziso lwabo olusemthethweni lweApple TV ukuze sonwabele umrhumo wethu kuhlobo oluhlawulelweyo lweYouTube.
Indawo yokudlala eSwift ihlaziywa ngokudibanisa amanqaku amatsha abalulekileyo
Isicelo seApple Swift sokudlala sifumene uhlaziyo olutsha apho imisebenzi emitsha kunye nophuculo longezwa khona ukuze ukufunda kwinkqubo kungumsebenzi olula kakhulu kwabancinci kwaye kungabancinci kangako.
I-Polymail ihlaziywa kwaye ngoku inika wonke umntu ukufikelela kwisikhangeli sewebhu
Isicelo solawulo lwemeyile esidumileyo se-iOs kunye neMac Polymail sifumene uphuculo. Phakathi kwabo, eyona nto ibalaseleyo yiPolymail Web
INintendo ibhengeza ingxelo kaMario Kart yee-smartphones
INintendo ibhengeza umdlalo wayo omtsha wezixhobo eziphathwayo ezingasayi kuba ngaphezulu kwaye akukho nto ingaphantsi kwenguqulo kaMario Kart eya kufika kwi2019.
I-Apple isusa iTelegram kwivenkile yeapp ukuze iphinde ivele kamva
Umnxeba ususiwe kwiVenkile yeApple ngokwe-CEO yayo iqinisekisile kwiakhawunti yakhe ye-Twitter, ngaphandle kokuqinisekisa ukuba izakubuya nini.
Ukuba ufuna ukwazi ukuba ngubani okulandelayo okanye uyekile ukukulandela kwiqonga le-Instagram kwaye ngendlela ufumanisa ukuba kutheni, kweli nqaku sikubonisa ezona zicelo zibalaseleyo zokwazi ukuba ngubani oyekile ukusilandela kwi-Instagram
Ukufikelela ngokuKhokelwa kweNdlela yeApple ngoku kuyafumaneka eNew Zealand, eBelgium, eSweden naseNetherlands
Umsebenzi okhokelwa ngumgaqo ofike kuApple Mas ngokufika kwe-iOS 11, sele ifike kwimimandla emitsha emine, ke le nkonzo sele ifumaneka kumazwe alishumi.
Ivenkile yeVenkile ihlaziya amaxabiso ayo kwamanye amazwe ngenxa yotshintsho lwerhafu
U-Apple uthumele i-imeyile kubaphuhlisi ababhengeza ukonyuka kwexabiso lezicelo zabo kumazwe athe ahlangabezana nokwahluka kweerhafu.
I-Deluxe jigsaw puzzle kunye neNdlu kaDa Vinci
Indlu kaDa Vinci, umdlalo wevidiyo apho siya kuba nakho ukuzalwa ngokutsha kwaye sithathe ukhenketho lwezixhobo ezimangalisayo zokusombulula iiphazili.
IAmazon ihlaziya isicelo sohlobo esilungisa i-iPhone X kunye ne-10,5-intshi ye-iPad Pro
Phantse iinyanga ezintathu emva kokuphehlelelwa kwe-iPhone X kunye neenyanga ezimbalwa ukusungulwa kwe-10,5-intshi ye-iPad Pro, iAmazon ihlaziya nje iapp yayo yohlobo lokufunda iincwadi kwi-iOS.
Iiklip zihlaziywa ngokudibanisa ileyibheli yonyaka omtsha waseTshayina kunye neposta
Ividiyo emnandi kaVenkile yomenzi wevidiyo ufumene uhlaziyo olutsha kubandakanya ileyibhile entsha kunye neposta yokubhiyozela uNyaka oMtsha waseTshayina.
I-iOS 11.3 iyakusivumela ukuba sihluze uvavanyo lweeVenkile zeApple
Inguqulelo yokugqibela ye-iOS 11.3 iya kusivumela ukuba sibale amanqaku ngokomhla wabo nohlobo lwabo.
INintendo iyayeka ukuxhasa iMiitomo
Ityala lokuqala likaNintendo kumaqonga eselfowuni yayinguMiitomo, umdlalo ongasayi kuphinda ufumane inkxaso ...
UApple uza kuyila ngokutsha iincwadi azilungelelanise kuyilo olutsha lweVenkile ye App
NgokukaBloomberg, ii-iBooks, ukongeza ekubeni zibizwa ngokuba ziincwadi kwi-iOS 11.3, ziya kugqitywa ngokupheleleyo ngokusungulwa kwe-iOS 12
I-Instagram ihlaziya usetyenziso lwayo ngokongeza inkxaso ye-GIFs kunye netekhnoloji ye-GIPHY kumabali ayo adumileyo ukubenza babe likhoboka ngakumbi kwaye bonwabe.
Isikhangeli seDuckDuckGo sihlaziywa ngenqaku elitsha ukunqanda umkhondo
Isikhangeli seDuckDuckGo sihlaziyiwe songeza ukhuseleko olungcono xa sithumela idatha kwisixhobo sethu kwi-Intanethi, sikhusela ekufikeleleni kwi-ISP yethu.
I-TestFlight ihlaziywa ivumela ukukhuphela usetyenziso ukuya kuthi ga kwi-150 MB ngenqanaba ledatha
Inkqubo yonjiniyela yeTestFlight isandula ukuhlaziywa, inyusa umda wokukhutshelwa kweapps ngedatha yeselfowuni ukuya kwi-150 MB, ilingana nenani leVenkile yeApple elisinike lona ukusukela oko kwasungulwa i-iOS 11
Thulisa uSiri okanye abasebenzisi abaninzi, uphuculo olufunyenwe kwi-HomePod yexesha elizayo
Ngokusebenzisa icography ye-iOS 11.2.5, imisebenzi emitsha yeKhayaPod kunye neSiri ifunyenwe. Abasebenzisi abaninzi kunye nokukwazi ukuthulisa
Ubomi kwintlantsi kunye nomdlalo wevidiyo uzele ziintlantsi
Igcwele iintlantsi, umdlalo wevidiyo oqokelela uphononongo olukhulu kwiingcali nakubasebenzisi ngokwabo.
IScreeny 2.0, eyona ndlela yokulawula imifanekiso kwi-iPhone okanye kwi-iPad
Ngaba ujonge umfanekiso olungileyo kunye nomphathi wevidiyo kwi-iPhone yakho okanye kwi-iPad? Into ekubonelela ngayo ngeScreeny 2.0 inomdla kakhulu
Ukunyusa ukujoyina i-iPhone X yeNdlela emnyama
Ukufakwa, oyena mdlali ubalaseleyo kwi-iPhone yethu, kwi-iPad nakwi-Apple TV, ekugqibeleni ihlaziywa ngeNdlela eMnyama elindelekileyo ye-iPhone X
Uyenza njani imowudi entsha emnyama kwisicelo seYouTube seIOS
I-YouTube ihlaziyiwe kwiVenkile ye App kubandakanya imo emnyama. Sikubonisa ukuba ungayilungisa njani ukuze i-iPhone yakho ijongeke ngokwahlukileyo kwimeko zokukhanya eziphantsi.
Ungabathintela njani abalandeli bethu be-Instagram ekubeni bazi ixesha lokugqibela esisebenzisa ngalo usetyenziso
Umsebenzi omtsha obandakanyiwe ngu-Instagram, uvumela bonke abalandeli bethu ukuba bazi ngalo lonke ixesha ixesha lokugqibela ukufikelela kwisicelo. Kule nqaku sikubonisa ukuba singawenza njani lo msebenzi.
Ungamisa njani ukhuphelo oluzenzekelayo kuzo zonke izixhobo ze-iOS
Indlela elungileyo yokukhubaza ukhuphelo oluzenzekelayo, sinokuthintela usetyenziso esizithengayo kwi-iPhone, sikhuphele kwi-iPad okanye ngokuchaseneyo.
I-Apple iyila kwakhona ujongano lwenguqulo yewebhu yeVenkile ye App enembonakalo efanayo naleyo yeOS
U-Apple ulwenze ngokutsha ngokutsha ujongano lwewebhu lweVenkile ye App ngoyilo oluphantse lwalandelwa kulolo sinokulufumana kwivenkile yesicelo ye-iOS 11.
I-WhatsApp yeShishini ifika, iitshintshi zeNkonzo yaMakhasimende ziya kwiincoko ezidumileyo
Abafana abavela kuWhatsApp ekugqibeleni banobuganga bokwazisa i-WhatsApp yeShishini, usetyenziso oluthile lweenkampani ukubonelela ngenkxaso yabathengi ngenkqubo yemiyalezo ekhawulezileyo.
Ikamva lencwadi yoqhakamshelwano ibizwa ngokuba yiUniversale
Ekugqibeleni singafikelela kwindawo yogcino lwedatha, apho sinokufumana khona nayiphi na inombolo yomnxeba, yabantu okanye yeenkampani, ukuze sikwazi ukunxibelelana nanini na xa siyifuna, nokuba sithini na kwi-ajenda ye-smartphone yethu.
USiri ngoku ukuvumela ukuba umamele iindaba zomhla kwifomathi yePodcast
I-Apple isebenza ukongeza umsebenzi omtsha ku-Siri ngokufika kwe-iOS 11.2.2: iya kukuvumela ukuba umamele iindaba zemihla ngemihla kwifomathi yepodcast
I-WhatsApp ifunda ngendlela yokuphepha i-SPAM kwiqonga layo lokuthumela imiyalezo
Ngelishwa, kuya kusiba yinto eqhelekileyo ukufumana imiyalezo ye-SPAM ngesicelo semiyalezo esikhokelela kwihlabathi: i-WhatsApp. Inkampani ithi iyasebenza ukunciphisa kodwa ngelixa sinokulandela iingcebiso
Uhlelo lokusebenza lwe-YouTube luya kuhlaziywa ngokudibanisa imo emnyama
Abanye abasebenzisi besicelo seYouTube, babanga ukuba bafumene uhlaziyo, olunenombolo eyi-13.01.4 edibanisa ukubanakho kongeza imowudi emnyama kwisicelo, ukhetho olufikelela kwi-ecosystem ye-Android.
UApple unikezela kwaye uya kuvumela abasebenzisi be-WeChat ukuba bathumele iingcebiso kwakhona ngokusebenzisa iapp
Ukujongana neemfuno ze-Tencent, umnini we-WeChat, u-Apple ugqibela ngokunikezela kwaye waphinda wamkela iingcebiso ngaphakathi kwe-app ngokukhululwa kwiikomishini ze-Apple.
Iifowuni zokusebenza zokususa idatha ye-EXIF kwiifoto
Ukuba awukwazi ukulinda ukuze ufike ekhaya ukuze wabelane ngeefoto zakho kodwa ufuna ukucima idatha ye-EXIF, kweli nqaku ndikubonisa izicelo ezi-4 ukuze ukwazi ukucima idatha ye-EXIF kwiifoto esizithatha nge-iPhone yethu .
Inkqubo ye-IFTTT ihlaziywa i-iOS 9
Uhlaziyo lokugqibela lwesicelo se-IFTTT luya kuba lolokugqibela oluya kuhambelana ne-iOS 9, kwaye ngenxa yoko ii-iPhone 4s, isiphelo sendlela esathi safumana uhlaziyo lokugqibela.
Vavanya ubuchule bakho nge-Nonstop Chuck Norris
I-Nonstop Chuck Norris, umdlalo omtsha we-arcade owasungulwa yiFlaregames ngalo mlinganiswa ukhethekileyo njengomlinganiswa ophambili, ngaba ungalinga?
Indlu yoNyango lweVR izisa iNyaniso eyiyo kunye noloyiko kwi-iPhone yethu
Indlela enomdla kakhulu yokonwabela iNyani eyiyo kwi-iPhone yakho enkosi kwiNdlu yoNyango lweVR.
Inkqubo yokuDlulisa ye-iOS iyakushiya Ivenkile yeeVenkile
Ukuhambisa isicelo sokulawula iifayile zeseva ngeFTP, kungekudala izakushiya iVenkile ye App, kuba ukuthengisa akubuyisi ukugcinwa kwayo.
Umdla wonjiniyela kwinyani eqinisekisiweyo eye yongezwa kwiinyanga ezidlulileyo
Ngokwedatha ye-Apptopia, umdla wonjiniyela kwinyani eyongeziweyo yehle kakhulu kwiinyanga ezidlulileyo.
Abaphuhlisi beApple bazuze ama-30% ngaphezulu ngo-2017
Ngokwedatha yakutshanje ebonelelwe yiApple, ingeniso ethe yafunyanwa ngabaphuhlisi kunyaka ophela ka-2017 inyuke nge-30% xa kuthelekiswa nonyaka ophelileyo.
I-Plusdede ihlaziywa ngohlaziyo olupheleleyo lwesicelo
U-Plusdede, owangena ezihlangwini zikaPordede ongasekhoyo, usafumaneka kwiVenkile ye App kwaye usinika ukufikelela kuzo zonke iimuvi kunye nothotho olukhoyo kumabonakude nakwi cinema. Esi sicelo sihlaziyiwe kunye noyilo olutsha oluphucula unxibelelwano kunye nenkqubo kunye nokusebenza kwayo.
IGeekbench 4 ihlaziywa ngokongeza i-iPhone 8 kunye ne-iPhone X kuthelekiso lweziphumo
Uhlaziyo lwamva nje lweGeekbench 4, lusinika iziphumo ezifunyenwe kwiimodeli zamva nje ze-iPhone, ukuze sikwazi ukuthelekisa intsebenzo kunye neemodeli zangaphambili.
I-Telegram X ihlaziywa ngokudibanisa imisebenzi emitsha
Enye indlela yesicelo esisemthethweni seTelegram, iTelegram X, sele ihlaziywa nje ngokudibanisa imisebenzi emitsha kunye nokuphucula ezinye zezo sele zifumaneka kodwa zingasebenzi kakuhle.
Uhlelo lokusebenza lwe-DJI lwe-iOS luqhelanisa ne-iPhone X ukongeza ekufumaneni i-firmware entsha ye-Spark kunye ne-Phamtom 4 Pro
Isicelo se-DJI sokulawula iSpark kunye nePhantom 4 Pro sele ihlaziyiwe ukuze ihambelane ne-iPhone X kwaye kwinkqubo yokuphucula eminye yemisebenzi yayo kunye nokulungisa iibhugi.
Inkqubo ye-PayPal ngoku iyahambelana ne-iPhone X
Isicelo seentlawulo zekhompyuter zePayPal zisandula ukuvuselelwa i-iOS yongeza ukungqinelana ne-iPhone X entsha kunye nescreen sayo neshiya phezulu kuyo.
I-Telegraph ekugqibeleni ifumana imo yobusuku elindelekileyo
Phantse iinyanga ezimbini zokulinda, usetyenziso lomyalezo weTelegra luhlaziyiwe nje lokongeza imo yasebusuku ye-iPhone X
IMicrosoft Edge ye-iOS kungekudala iza kuba nohlaziyo olutsha apho iya kudibanisa ukuhambelana neLastPass kunye ne1Password
I-Instagram ivula iposti entsha ecetyiswayo kwisondlo sethu
I-Instagram yongeza ezintsha, kunye nokuphikisana, ukuthumela iingcebiso kwisondlo sethu ukuze sichithe ixesha elininzi kwi-intanethi.
Ukusebenza ++ kufumana olona hlaziyo lukhulu kwimbali yayo
Uhlaziyo olutsha lwe-Workouts ++ luzisa imisebenzi emitsha esinokuyonwabela ukuze senze ngokwezifiso ukusebenza kwethu nge-Apple Watch.
IMacX DVD Ripper Pro, eyona ndlela yokuqhekeza iDVD kunye nokuguqula iifayile zevidiyo
Ukukrazula iiDVD zosapho lwethu okanye iimovie zethu khange kube lula kwaye zikhawuleze kuneMacX DVD Ripper Pro
Koins, isiguquli semali esincinci se-iPhone kunye ne-iPad
Ngaba ungomnye wabo baguqula imali imini yonke ukuze babone ukuba ungagcina imali? I-Koins yinkqubo enomdla ye-iPhone kunye ne-iPad
Iimephu zikaGoogle zihlaziywa ngohlengahlengiso olutsha lobugcisa
Uhlaziyo lwamva nje lwesicelo seMaphu zikaGoogle ze-iOS zisizisela uyilo olutsha lokuchukumisa imibala emitsha
Uhlaziyo lomhleli wezithombe zomnyama kwaye uyayiqonda iRAW
Iifoto zeRAW zivumela umsebenzisi ukuba abe nolawulo olukhulu kumfanekiso wokugqibela owenziwa ngumsebenzisi, ngoku i-app yegumbi le-Darkroom Photo ixhasa le fomathi.
Akusekho maqela amnyama kwiYouTube: usetyenziso lwe-iOS luya kulungelelanisa ividiyo kwifomathi yesikrini
Uhlaziyo olulandelayo lweYouTube luza kuthi ndlela-ntle kulonwabo olumnyama nolunentiyo, njengoko iividiyo ziya kutshintshwa zibe kwifomathi yesikrini
Ngaphakathi kuza kwi-iOS kwaye ngekhe uyiphose
I-Playdead isinika impumelelo yayo Ngaphakathi kubasebenzisi be-iPhone, i-iPad kunye neApple TV. Umsebenzi wobugcisa oza kukuthimba ukusuka kumzuzu wokuqala.
Imidlalo emi-5 emnandi ye-iOS ngaphezulu nje kwe-euro
Kwiintsuku ezimbalwa, sinokufumana uthotho lwemidlalo enesaphulelo esinokuyifumana ngaphezulu kweyure enye kwiVenkile ye App
Ngaba uyafuna ukuzama inkonzo kaTidal's HiFi simahla? Sikuxelela indlela
Njengoko kuxeliwe yiVerge, ukuqala nge-25 kaDisemba elandelayo, siya kuba nakho ukuvavanya inkonzo kaTidal kaHiFi yasimahla kangangeentsuku ezili-12.
IAmazon isayina isivumelwano sokusasaza lonke uthotho lweSpanish kwinkonzo yayo yeVOD
IAmazon ifikelele kwisivumelwano kunye neenethiwekhi eziphambili zaseSpain zokubonelela ngomxholo wazo kwinkonzo yeVOD ngenye imini emva kokuqala kwayo
Impucuko VI iza kwi-iPad, esona sicwangciso silungileyo sethebhulethi yakho
Impucuko VI ngokuqinisekileyo iza kwi-iPad ukuze ukonwabele esinye sezona ndlela zilungileyo zokudlala njengoko ungazange ucinge.
Ungajonga njani iLottery yeKrisimesi kwi-iPhone yakho
Ukuba awufuni kulinda ukuba uphumelele iLottery okanye ilitye, ngezi zicelo uyakufumanisa ngokukhawuleza
I-Wikipedia ikhupha imowudi emnyama ecetyiswayo kwimiboniso ye-OLED
Imowudi emnyama ifike kwisicelo seWikipedia ukongeza kolunye uhlaziyo olubalulekileyo njengokunciphisa ukusetyenziswa kwedatha kwi-iOS.
I-Pokèmon Yiya! izakuphumeza i-Apple ARKit kungekudala
Ngoku kuxa i-Niantic ibamba i-iOS kwaye isebenzisa i-ARKit njengenkqubo yokusebenza yalo mdlalo wevidiyo ukhethekileyo kunye nomlutha.
Andiqinisekanga ngento oza kuyinika ngeKrisimesi? Nge-Wream kulula kakhulu
Ukuba awuyazi into oza kuyinika ngeKrisimesi, enkosi kwisicelo seWream sinokwazi ngalo lonke ixesha ukuba zeziphi izipho ezifunwa ngabahlobo bethu
I-Hangouts ngoku inika inkxaso kwi-iPhone X
Isicelo sokuthumela imiyalezo yeHangouts sisandula ukufumana umnikelo wokuhlaziya omtsha, okokugqibela, inkxaso yesikrini se-iPhone X
Uhlelo lokusebenza lwePhilips Hue ngoku lwenzelwe i-iPhone X
Kancinci kancinci, zonke izicelo zihlengahlengisa ujongano lwe-iPhone X. Eyokugqibela ibe yeyenkqubo yokukhanyisa ekrelekrele yePhilips Hue.
I-Readdle Spark ihlaziywa ukuphucula ukusebenza
Namhlanje inkampani yonjiniyela ikhuphe uhlaziyo olujolise ngokupheleleyo ekuphuculeni ukusebenza kwesicelo sayo, iSpark.
Umxhasi osemthethweni weReddit uhlaziywa ngokongeza inani elikhulu lezinto ezintsha
Umthengi osemthethweni weReddit, usandula ukuvuselelwa esongeza inani elikhulu lemisebenzi yokuphucula, nangakumbi ukuba kunokwenzeka, ukusebenza kwayo.
Ukufakwa kwi-5 kuvuselela amaxabiso esicelo kwaye ayizondaba zimnandi
Abafana kwiFirecore, umphuhlisi we-Infuse, bavele bahlaziya amaxabiso esicelo sabo, banciphisa kwaye badibanisa umrhumo wenyanga
Inkqubo yekhamera yeHalide ihlaziywa ngenkxaso eyandisiweyo yeRAW kunye nenkxaso yetekhnoloji ye3D yokuChukumisa
Enye yezonaapps zibalaseleyo zifumaneka kwiVenkile yeApple ukuthatha imifanekiso, iHalide, ihlaziyiwe nje yongeza ukuphucula kunye nemisebenzi emitsha
NgeBrowbrow siza kusebenzisa amashiya ethu kunye nekhamera ye-iPhone X ukudlala
Umdlalo weRainbrow usinika amava omdlalo omtsha, apho kufuneka sisebenzise iinki zethu ukulawula umlinganiswa, i-emoji.
IMicrosoft ibhengeze ukuba kungekudala izokwazisa ngesicelo sayo sengxoxo esibhaliweyo kunye nesandi, esisebenza ngaxeshanye neXbox One.
Oku kujolise kwiMiniCast, ukubonelela ngokudityaniswa kokuphatheka kunye nenkululeko kwindlela esivelisa ngayo iiPodcasts zethu, enye indlela enomdla.
I-indie classic NGAPHAKATHI ifika kwiVenkile ye App, ngekhe uyiphose
Ukufika kwangoku kwiVenkile yeApple kungaphakathi, lo mdlalo we-indie uye wahlengahlengiswa kwi-iOS ukuze iingcali kunye nabantu ongabaziyo bonwabele.
IPhepha leDropbox lihlaziywa kunye nokuphuculwa kwamava omsebenzisi oselfowuni
Isicelo sePhepha leDropbox sihlengahlengisiwe kwaye ngoku songeza imisebenzi emitsha kubasebenzisi abayisebenzisa kwiselfowuni okanye kwithebhulethi yabo
UGoogle uyaqhubeka nokuhlaziya usetyenziso ukuze alungelelanise i-iPhone X kwaye ngeli xesha bahlaziya iGoogle Play Music ukuxhasa i-iPhone entsha.
Uhlaziyo lwamva nje lwe-Asphalt 8 olusizisela lona: I-Airborne isinika ukuhambelana ne-iPhone X kunye nezithuthi ezitsha zamavili ashushu
IKhalenda kaGoogle ngoku iyahambelana ne-iPhone X kunye nomsebenzi wokutsala nolahlo
Ngaphezulu kwenyanga emva kokumiliselwa kwayo, uGoogle usandula ukukhupha uhlaziyo lweKhalenda kaGoogle olwenza ukuba luhambelane ne-iPhone X
I-Facebook isungula iIziphumo zeHlabathi ngenyani eyongeziweyo yoMyalezo
I-Facebook ayidinwa ukukopa yonke into enxulumene ne-Snapchat, yiyo loo nto isungula Iziphumo zeHlabathi ezitsha, iziphumo ezitsha ze-Facebook Messenger.
I-Apple yazisa ngenkqubo yokuthenga kwangaphambili yeeapps ezintsha kuphela
U-Apple usandula ukubhengeza inkqubo entsha yokuthenga kunye nokukhutshelwa kwezicelo kunye nemidlalo kwangaphambili ngaphambi kokumiliselwa kwayo ngokusemthethweni kwiVenkile ye App.
UGoogle umilisela ii -apps ezintsha zokulinga ukufota ze-iOS
Abafana kuGoogle banobuganga bokwazisa ii -apps ezintsha zokufota ze-iOS ukuze baqokelele ulwazi kunye nokuphucula i-AI yenkampani.
Jonga ukuba uxabiseke kangakanani kwibhanki yakho ngeFinScore, kwiFintonic
Ngaba uyafuna ukwazi ukuba baya kukunika imali mboleko okanye imali mboleko oyifunayo? Fumanisa ukuba ibhanki yakho icinga ntoni ngokulula nangokukhawuleza ngeFintonic.
I-YouTube inokumilisela inkonzo entsha yokusasaza umculo
Ngomhla we-Matshi olandelayo, i-YouTube inokumilisela eyayo inkonzo yokusasaza umculo ukuze ikhuphisane isiza kuwe ngeSpotify kunye neApple Music
Umfundi we-RSS Feedly uyahlaziywa ukuze ahambelane ne-iPhone X
Uhlaziyo lwamva nje lweFeedly, ekugqibeleni lusizisela ukungqinelana ekudala kulindelwe kunye nefomathi entsha yesikrini ye-iPhone X ukongeza kwimowudi yobusuku
Umdlalo wasimahla esithetha ngawo namhlanje, Idolophu Yam: Ukugcina abantwana, umdlalo apho abantwana baya kufuneka banakekele abantwana abathandathu kwindawo yokugcina abantwana
I-Pokémon Go iyahlaziywa ukuze idlale ne-Hoenn's Pokémon
Kwaye kuhlaziyo lwamva nje lomdlalo wePokémon Go wezixhobo ze-iOS kunye ne-Android, a ...
Ikhalenda yeNewton, ikhalenda entsha ye-iOS
Ukusuka kubaphuhlisi abafanayo bakaNewton, umxhasi wemeyile, iKhalenda kaNewton iza kuthi ukuzalisekisa eyokuqala. Ujongano olulula nolungqalileyo.
Uninzi lube ziinyanga zamarhe, ukuvuza kunye nokunye malunga nokuqaliswa kwesicelo seAmazon Prime Video se ...
UGoogle uhlaziya usetyenziso lweGmail ukuxhasa i-iPhone X
Abafana kuGoogle ekugqibeleni bahlaziya i-app ye-Gmail ukuxhasa isikrini esitsha se-iPhone X ukongeza kwinkxaso yeakhawunti ye-IMAP.
Abanye Abafowunelwa (TOC), enye indlela kwi-ajenda yakho yabucala iyonke
Ngaba uyafuna usetyenziso olugcina bonke ubumfihlo babafowunelwa bakho? I-TOC okanye Abanye oQhagamshelwa kuyeyona ndlela ilungileyo yokwenza lo msebenzi
Iifoto zikaGoogle zisungula iindaba ezinomdla ezihambelana ne-iOS 11
Uhlelo lokusebenza lweefoto zikaGoogle luphehlelele uhlaziyo olutsha kwiVenkile ye App oluquka umsebenzi wokutsala nolahlo we-iOS 11, phakathi kwezinye izinto ezintsha.
IMicrosoft yazisa ngebrawuza yeEdge ye-iOS ngaphandle kokulungiswa kwe-iPhone X
Isikhangeli sikaMicrosoft, iEdge, sele iqalile ukubakho kwiVenkile yeApple, kodwa kuphela kwiqela elincinci lamazwe.
UGoogle uhlaziya iimephu zikaGoogle ukuze aziqhelanise ne-iPhone X